Amin' ny Ntaolo malagasy dia atao hoe andriamanitra na zanahary ireo fanahy manana hery sy fahalalana ary hasina ambony lavitra noho ny an 'ny fanahy hafa sy ny an' ny zavaboary rehetra. Amin' ireo zanahary ireo dia inoan' ny Ntaolo maalgasy ny fisian' ny iray izay antsoiny hoe Zanahary na Andriamanitra fotsiny, izay lehibe indrindra noho ireo andriamanitra ireo, sady mpahary, manam-pahefana hanome na hanaisotra ny ain' ny zavamananaina.
Tamin' ny nifampikasohan' ny kolontsain' ny Ntaolo malagasy amin' ny kolontsaina silamo dia naetry voninahitra tsy ho andriamanitra ireo andriamanitra maro hafa ninoan' ny Malagasy, ka i Zanahary na Andriamanitra tokana ihany no andriamanitra. Mbola hita taratra ao amin' ireo fedrà sy fomba fiteny nolovaina tamin' ny Ntaolo malagasy anefa ny finoany ny fisian' ny andriamanitra maro sy ny fahafahan' ny fanahy hafa, isan' izany ny fanahin' ireo razana, ho lasa andriamanitra. Maro noho izany fivoaran' ny finoan' ny Malagasy izany ny mpanoratra mivoy ny maha tokana ny andriamanitra nivavahan' ny Ntaolo malagasy, na dia fantatra fa tsy vahoaka nino andriamanitra tokana avokoa no nipoiran'ny razamben' ny Malagasy.
Ny ankamaroan' ireo vahoaka nitondra ny kolontsainy teto Madagasikara (ny Afrikana, ny Arabo, ny Indiana, ny Indôneziana, sns) dia mivavaka amin' andriamanitra maro. Ohatra, maro amin' ny fivavahan-drazana afrikana no mino ny fisian' ny andriamanitra maro. Fantatra koa fa ny Arabo talohan'ny nisian' ny fivavahana silamo dia nivavaka tamin' andriamanitra maro. Ny Indiana hindo koa, afa-tsy ireo Silamo na Kristiana ohatra, dia mivavaka amin' andriaanitra maro.
Araka an' i Ferrand, ny teny hoe andriananahary dia avy amin' ny teny hoe adhyia (ilay fisiana andriamanitra niandohan' ny zavatra rehetra) sy ny hoe hari (midika hoe "masoandro") ao amin' ny teny sanskrita sy ireo teny aostrôneziana. Nikambana ireo teny roa ireo ka nanome ny hoe Adhyia-hari (izay midika hoe "andriamanitra masoandro") sy Yang-hari, ("Andriamajitra masoandro). Ny teny malagasy hoe hary ("fahazavan' ny masoandro", "masoandro") dia hita amin' ny teny hoe antoandrobenanahary.
Lavitra sy masina loatra Andriamanitra ka ilaina ny mpanelanelana eo aminy sy ny olombelona, ka isan' ireo mpanelanelana ireo ny Vazimba, ny razana, ny mpanjaka niamboho, sns. Ny razana no ahazoan' ny velona ny hasina avy amin' Andriamanitra. Mpanelanelane koa ny mpisorona sy ny ombiasa.
Araka ny fedrà maIagasy sy ny fitokavana[hanova | hanova ny fango]
Misy lahy sy vavy ny zanahary, ka misy ny Zanahary lahy sy ny Zanahary vavy. Amin' ny ankapobeny dia heverina ho lahy nefa koa ho tsy vavy tsy lahy i Zanahary. Indraindray dia manambady ny Zanahary ka miteraka lahy na vavy (zanaka lahin-Janahary zanaka vavin-Janahary). Misy koa ny Zanahary kely sy ny Zanahary be. Akoatr' izany rehetra izany dia manana toeram-ponenana samihafa ny Zanahary: Zanahary an-danitra (ambony), Zanahary an-tany (ambany), Zanahary anaty rano, sns.
Tsy mitovy hevitra ny mpikaroka. Ny sasany manaiky ny finoan' ny Malagasy ny fisian' ny Zanahary na Andriamanitra maro (politeisma) fa ny sasany indray mifanohitra amin' izany ka milaza fa tokana ny Andriamanitra inoan' ny Ntaolo malagasy fa tsy maro.
Ohabolana sy fitenenana momba an'i Zanahary[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andriamanitra_(finoan-drazana_malagasy)&oldid=998579"
Voaova farany tamin'ny 22 Novambra 2020 amin'ny 09:10 ity pejy ity.